NORWAY: Maamulka magaalada Stavanger oo soomaalida shaqeysa ku xiray warqad caddeyneysa in aysan qabin cudurka Coronavirus – Calanka.com
NORWAY: Maamulka magaalada Stavanger oo soomaalida shaqeysa ku xiray warqad caddeyneysa in aysan qabin cudurka Coronavirus
in HEADLINE, Norway
Soomaalida caafimaadka ka shaqeysa iyo kuwa tagaasida wada ee ku nool caasimadda saddexaad ee dalka Norway ee Stavanger ayaa ka carootay faquuq uu kula kacay maamulka magaaladaasi kadib markii uu soo saaray sharci khuseeya iyaga keliya kaas oo dhigaya in ey la yimaadeen warqad caddeyneysa in aysan qabin cudurka coronavirus marki ay shaqo ka dalbanayaan maamulka ama kommuunaha.
Sharcigan ayaa sidoo kale saameyna kuwa shaqada ka haysta maamulka magaalada, waxaana lagu wargeliyay in ay la yimaadaan caddeyntaasi caafimaad marka dambe ee ay soo shaqo galayaan.
Maamulka ayaa farriintan ugu wada diray soomaalida ay khuseyso taleefanadooda gacanta.
Arrintan ayaa timid kadib markii soomaalida dalkaasi lagu sifeeyay duulka ugu badan ee ajaanibta ee u nuqul ama uu ku dhoco cudurka COVID-19.
Cudurka coronavirus oo kusoo labakacleeyay dalkaasi Norway ayaa sababay in kor loo qaado ka hortaggiisa, waxaana lasoo saaray shuruuc dhowr ah oo dadka lagu sii xakameynayo.
Abdirahman Omar Moallim oo madax ka ah ururka “Unge minoriteter” ayaa ka dhiidhiyay faquuqan soomaalida lagula kacayo, waxaana uu sheegay mar uu la hadlayay idaacadda NRK in arrintani tahay mid sii kordhineysa faquuqa lagula kacayo soomaalida.
Maamulka Stavanger ayaa sheegay in isbuuc gudihiis laga helay magaalada Stavanger 220 kiis oo cudurka coronavirus ah kaas oo intiisa badan laga helay soomaalida, khaasatan soomaalida tagaasida wada.
Waaxda caafimaadka magaaladaasi ayaa caddeeyay in ay gudbiyeen farriimahaasi si loo ilaaliyo bulshada, waxaana ay sheegeen in ay ka xunyihiin in ay si gooni ah u taabaneyso umad gaar ah laakiin ay ku khasaban yihiin maadaama aysan jirin si kale oo loo abaari kari.